Momfa Nidi Mma Nea Nidi Sɛ No | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
“Nhyira ne nidi ne anuonyam ne ahoɔden nka Nea ɔte ahengua no so no ne Oguammaa no daa daa.”​—ADI. 5:13.
NNWOM: 9, 108
Adɛn nti na ɛfata sɛ yedi Yehowa ne Kristo ni?
Nnipa bɛn na ɛfata sɛ yedi wɔn ni, na adɛn ntia?
Sɛ yɛde nidi ma wɔn a nidi sɛ wɔn a, ɛso mfaso no bi ne sɛn?
1. Adɛn nti na ɛfata sɛ yedi nnipa bi ni, na dɛn na yɛrebesusuw ho?
SƐ YEDI obi ni a, nea ɛkyerɛ ne sɛ, yɛn ani kũ onii no ho na yebu no. Nokwarem no, onipa a ɔfata sɛ yɛma yɛn ani kũ ne ho na yɛde obu a ɛte saa ma no no, ɛyɛ a yɛhwɛ kwan sɛ ɔbɛyɛ obi a wayɛ biribi anaasɛ okura dibea titiriw bi. Enti, yebetumi abisa sɛ, Hena na ɛfata sɛ yedi no ni, na adɛn nti na ɛfata sɛ yɛde nidi a ɛte saa ma no?
2, 3. (a) Adɛn nti na Yehowa paa na ɔfata sɛ yedi no ni? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.) (b) Hena ne Oguammaa a wɔaka ne ho asɛm wɔ Adiyisɛm 5:13 no, na adɛn nti na ɛfata sɛ yedi no ni?
2 Adiyisɛm 5:13 ma yehu sɛ, ɛfata paa sɛ yɛde nidi ma “nea ɔte ahengua no so no . . . ne Oguammaa no.” Adiyisɛm ti 4 ma yehu ade baako nti a ɛfata sɛ yedi Yehowa ni. Honhom abɔde a wɔwɔ soro no maa wɔn nne so yii Yehowa, ‘nea ɔte ase daa daa no’ ayɛ. Wɔkae sɛ: “Yehowa, yɛn Nyankopɔn, wofata sɛ wugye anuonyam ne nidi ne tumi, efisɛ wo na wobɔɔ nneɛma nyinaa, na wo pɛ nti na ɛwowɔ hɔ na wobɔe.”—Adi. 4:9-11.
3 Oguammaa no ne Yesu Kristo, “Onyankopɔn Guammaa a oyi wiase bɔne fi hɔ no.” (Yoh. 1:29) Bible ma yehu sɛ Yesu korɔn koraa sen onipa biara a wadi hene pɛn ne wɔn a wɔredi hene seesei no nyinaa. Bible ka Yesu ho asɛm sɛ: ‘Ɔyɛ ahene mu Hene ne awuranom mu Awurade, nea ne nkutoo wɔ nkwa a owu nnim, na ɔte hann a wontumi mmɛn ho mu, nea onipa biako mpo nhuu no da na obiara ntumi nhu no.’ (1 Tim. 6:14-16) Nokwasɛm ne sɛ, ɔhene foforo bɛn na yɛn bɔne nti, wafi ne pɛ mu awu de ne nkwa ayɛ agyede ama yɛn? So biribi nka wo sɛ wo ne honhom abɔde ɔpedudu a wɔwɔ soro no mmom nka asɛm a edi hɔ yi anaa? Honhom abɔde a wɔwɔ soro no ka sɛ: “Oguammaa a wokum no no fata sɛ ogye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne nidi ne anuonyam ne nhyira.”—Adi. 5:12.
4. Ɛnyɛ sɛ, sɛ yɛpɛ a na yebedi Yehowa ne Kristo ni. Adɛn ntia?
4 Ɛnyɛ sɛ, sɛ yɛpɛ a na yebedi Yehowa ne Kristo ni. Sɛ yebenya daa nkwa a, ɛsɛ sɛ yedi wɔn ni. Asɛm a Yesu kae wɔ Yohane 5:22, 23 no ma yehu saa asɛm no pefee. Yesu kae sɛ: “Agya no mmu obiara atɛn, na mmom ɔde atemmu nyinaa ahyɛ Ɔba no nsa, na ama obiara adi Ɔba no ni sɛnea wodi Agya no ni no. Nea onni Ɔba no ni no, nni Agya a ɔsomaa no no ni.”​—Kenkan Dwom 2:11, 12.
5. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde nidi ne obu a ɛfata ma nnipa nyinaa?
5 Wɔbɔɔ nnipa wɔ “Onyankopɔn suban so.” (Gen. 1:27) Enti wɔn mu dodow no ara da Onyankopɔn su ahorow no bi adi kodu baabi. Nnipa tumi da ɔdɔ, ayamye, ne ayamhyehye adi kyerɛ wɔn ho wɔn ho. Bere a Onyankopɔn bɔɔ nnipa no, ɔmaa wɔn ahonim. Ɛwom sɛ ɛtɔ mmere bi a ahonim no ntumi nyɛ adwuma yiye, nanso mpɛn pii no, nnipa fi awosu mu tumi hu sɛ biribi yɛ papa anaasɛ ɛyɛ bɔne, ɛyɛ nokware anaasɛ ɛyɛ atoro, ɛfata anaasɛ ɛmfata. (Rom. 2:14, 15) Nnipa dodow no ara ani gye nneɛma a ɛho tew na ɛyɛ fɛ ho. Wɔn mu dodow no ara pɛ sɛ wɔne afoforo tena asomdwoe mu. Sɛ wonim oo, sɛ wonnim oo, wɔda Yehowa anuonyam adi kodu baabi. Ɛno nti, ɛfata sɛ yɛde nidi ne obu ma nnipa nyinaa.​—Dw. 8:5.
EHIA SƐ YEHU NIDI A ƐFATA SƐ YƐDE MA OBIARA
6, 7. Nsonsonoe bɛn na ɛwɔ ɔkwan a Yehowa Adansefo fa so de nidi ma wɔn yɔnko nnipa ne ɔkwan a nnipa pii fa so de nidi ma wɔn yɔnko nnipa no ntam?
6 Ehia sɛ yehu nidi a ɛfata sɛ yɛde ma afoforo ne baabi a ɛsɛ sɛ yedi wɔn ni kodu. Nnipa a wɔtɔ sin dodow no ara suasua Satan wiase no su denneennen. Ɛno nti, sɛ́ anka nkurɔfo de nidi ne obu a ɛfata bɛma mmarima ne mmea binom no, wɔtaa kotokotow wɔn te sɛ nea wɔresom wɔn mmom. Nidi a nnipa de ma nyamesom ne amanyɔsɛm mu akannifo, wɔn a wɔagye din wɔ agokansi mu, wɔn a wɔagye din wɔ anigyede mu, ne nnipa foforo a wɔagye din no, ɛtɔ da a wɔma wɔn a wɔte saa no ba bɛyɛ sɛ anyame bi mpo. Wei ama mpanyin ne mmofra nyinaa hwɛ wɔn suasua wɔn. Wotumi suasua sɛnea wɔkasa anaa sɛnea wɔyɛ wɔn ade, wɔn ntadehyɛ, anaa wɔn abrabɔ.
7 Nidi a wɔde ma nnipa ho adwene a ɛmfata saa no, nokware Kristofo twe wɔn ho fi ho. Kristo nko ara ne onipa a ɔtenaa ase a yebetumi aka sɛ ɛfata paa sɛ yesuasua no. (1 Pet. 2:21) Sɛ yɛde nidi a ɛtra so ma nnipa a, Onyankopɔn ani rennye ho. Ɛsɛ sɛ yɛma nokwasɛm a edi hɔ yi tena yɛn adwenem: “Wɔn nyinaa ayɛ bɔne na wonnu Onyankopɔn anuonyam ho.” (Rom. 3:23) Nokwarem no, onipa biara nni hɔ a ɛfata sɛ yedi no ni araa ma ɛyɛ sɛ nea yɛresom no.
8, 9. (a) Yehowa Adansefo bu aban mpanyimfo sɛn? (b) Ɛhe na ɛfata sɛ yetie aban mpanyimfo kodu?
8 Nnipa bi di tumi wɔ wiase yi mu. Aban mpanyimfo hwɛ ma mmara yɛ adwuma, na wodi wɔn manfo ahiade ho dwuma ma wɔn. Obiara nya wɔn adwuma no so mfaso. Ɛno nti, ɔsomafo Paulo ka kyerɛɛ Kristofo sɛ wommu aban mpanyimfo sɛ “atumfoɔ a wɔkorɔn” a ɛsɛ sɛ Kristofo brɛ wɔn ho ase ma wɔn. Paulo ka kyerɛɛ Kristofo sɛ: “Momfa nea ɛsɛ obiara mma no, tow mma nea tow sɛ no; . . . nidi mma nea nidi a ɛte saa sɛ no.”​—Rom. 13:1, 7.
9 Ɛno nti, Yehowa Adansefo fi wɔn pɛ mu di aban adwumayɛfo ni. Kristofo fi wɔn pɛ mu de nidi a ɔman a wɔte mu no hwehwɛ sɛ wɔde ma aban adwumayɛfo no ma wɔn. Sɛ aban adwumayɛfo reyɛ wɔn adwuma a, yɛnsɔre ntia wɔn, na mmom yetie wɔn. Nanso, Kyerɛwnsɛm no ma yehu nidi a ɛfata sɛ yɛde ma wɔn ne baabi a ɛsɛ sɛ yetie wɔn kodu. Enti, yɛrentumi nyɛ osetie mma aban adwumayɛfo nkodu baabi a ɛbɛma yɛayɛ Onyankopɔn so asoɔden anaa ɛbɛma yɛde yɛn ho ahyehyɛ wiase no nsɛm mu.​—Kenkan 1 Petro 2:13-17.
10. Sɛ yɛhwɛ Yehowa asomfo a wɔtenaa ase tete no a, nhwɛso pa bɛn na wɔyɛe wɔ sɛnea wɔne aban mpanyimfo ne aban ahorow dii mu?
10 Sɛ yɛhwɛ Yehowa asomfo a wɔtenaa ase tete no a, yehu sɛ wɔyɛɛ nhwɛso pa wɔ sɛnea wɔne aban mpanyimfo ne aban ahorow dii mu. Bere a Roma Ahemman no kae sɛ nkurɔfo nkɔkyerɛw wɔn din no, Yosef ne Maria kɔkyerɛw wɔn din. Ɛmfa ho sɛ na aka bere tiaa bi ama Maria awo n’abakan no, ɔne ne kunu twaa kwan kɔɔ Betlehem. (Luka 2:1-5) Akyiri yi, bere a wɔbɔɔ Paulo sobo sɛ wayɛ bɔne bi no, ɔkyerɛkyerɛɛ n’asɛm mu wɔ obu mu, na ɔde nidi a ɛfata maa Ɔhene Herode Agripa. Saa ara nso na ɔde nidi a ɛfata maa Festo a na ɔyɛ Roma mantam Yudea amrado no.​—Aso. 25:1-12; 26:1-3.
11, 12. (a) Adɛn nti na ɛsono nidi a yɛde ma aban mpanyimfo ne nea yɛde ma nyamesom akannifo? (b) Bere a Ɔdansefo bi a ofi Austria de nidi maa ɔmanyɔfo bi no, adepa bɛn na efii mu bae?
11 Ebia nyamesom akannifo bɛhwɛ kwan sɛ nkurɔfo de nidi soronko bɛma wɔn, nanso Yehowa Adansefo mfa nidi a ɛte saa mma wɔn. Atoro som nka Onyankopɔn ho nokwasɛm, na mmom wokyinkyim nea Onyankopɔn Asɛm no kyerɛkyerɛ. Enti obu a yɛde ma yɛn yɔnko nnipa no, ɛno ara bi na yɛde ma nyamesom akannifo. Ɛnsɛ sɛ yɛde nidi soronko bi ma wɔn. Momma yɛnkae sɛ, Yesu bere so no, na nyamesom akannifo bi a wɔte saa wɔ hɔ, na Yesu kasa tiaa wɔn. Ɔkae sɛ wɔyɛ nyaatwomfo ne akwankyerɛfo anifuraefo. (Mat. 23:23, 24) Nanso aban mpanyimfo de, sɛ yɛde obu ne nidi a ɛfata ma wɔn a, biribi pa bi tumi fi mu ba, na biribi a yɛnhwɛ kwan mpo tumi fi mu ba.
12 Ná Leopold Engleitner yɛ Ɔdansefo a ɔyɛ nsi a ofi Austria. Nasifo kyeree no de no tenaa keteke mu kɔɔ Buchenwald nneduaban mu. Ná Ɔbenfo Heinrich Gleissner nso yɛ ɔdeduani a ɔte saa keteke no ara mu. Ná ɔbenfo no yɛ ɔmanyɔfo wɔ Austria. Nanso, na Nasifo no ani nnye ne ho bio. Bere a wɔte keteke no mu rekɔ nneduaban no mu no, Onua Engleitner kyerɛkyerɛɛ ne gyidi mu kyerɛɛ Gleissner wɔ obu mu, na ɔno nso yɛɛ aso tiee no. Wiase ko a ɛto so mmienu no akyi no, Gleissner de dibea a na ɔwɔ boaa Adansefo a wɔwɔ Austria mpɛn pii. Ebia wunim nneɛma pa bi a asisi bere a Adansefo binom de obu a ɛfata maa aban mpanyimfo, na wodii wɔn ni sɛnea Bible ka sɛ ɛsɛ sɛ Kristofo yɛ no.
AFOFORO A WƆFATA NIDI
13. Henanom paa na ɛfata sɛ yebu wɔn na yedi wɔn ni, na adɛn ntia?
13 Ɛfata paa sɛ yɛde nidi ne obu ma wɔn a yɛne wɔn bɔ abusua wɔ gyidi mu no. Wɔn a wɔfata sɛ yɛde nidi ne obu ma wɔn paa ne asafo mu mpanyimfo a wodi nneɛma anim no. (Kenkan 1 Timoteo 5:17.) Yɛde nidi ma saa anuanom no ɛmfa ho ɔman a wofi mu, wɔn nhomanim, gyinabea a wɔwɔ wɔ asetena mu, anaa sɛnea wɔn sikasɛm te. Bible ka wɔn ho asɛm sɛ ‘nnipa mu akyɛde,’ na wodi dwuma titiriw bi wɔ nhyehyɛe a Onyankopɔn ayɛ a ɔnam so ma ne nkurɔfo nsa ka wɔn ahiade no mu. (Efe. 4:8) Momma yɛnhwɛ asafo mu mpanyimfo, amansin so ahwɛfo, Baa Boayikuw mufo, ne Akwankyerɛ Kuw no mufo. Yɛn nuanom mmarima ne mmea a wɔtenaa ase wɔ asomafo no bere so no de obu kɛse maa wɔn a wɔpaw wɔn ma wodii nneɛma anim no paa, na saa ara na yɛn nso yebu wɔn a wodi yɛn anim nnɛ no. Kristofo asafo no ananmusifo a yenim wɔn yiye no, yɛnkotokotow wɔn te sɛ nea yɛresom wɔn. Saa ara nso na sɛ yehu wɔn a, yɛnyɛ yɛn ade te sɛ nea yɛahu ɔsoro abɔfo bi. Nanso, adwumaden a saa mmarima no yɛ ne ahobrɛase a wɔda no adi nti, yɛde obu ne nidi ma wɔn.​—Kenkan 2 Korintofo 1:24; Adiyisɛm 19:10.
14, 15. Kyerɛkyerɛ nsonsonoe a ɛwɔ wɔn a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ ahwɛfo, ne Kristofo a wɔyɛ ahwɛfo anokwafo no ntam.
14 Wobu asafo mu mpanyimfo a wɔte saa no sɛ honhom fam ahwɛfo a wɔbrɛ wɔn ho ase. Esiane wɔn ahobrɛase nti, wɔmma nkurɔfo nhoahoa wɔn te sɛ nea nkurɔfo hoahoa nnipa a wɔagye din no. Wei ma wɔda nsow koraa wɔ nyamesom akannifo pii a wɔwɔ hɔ nnɛ ne wɔn a na wɔwɔ asomafo no bere so no ho. Yesu kaa nyamesom akannifo a na wɔwɔ ne bere so no ho asɛm sɛ: “Wɔpɛ mpanyin tenabea wɔ anwummeduan ase ne hyiadan mu nkongua a ɛwɔ anim no, ne gua so nkyia.”—Mat. 23:6, 7.
15 Kristofo a wɔyɛ ahwɛfo anokwafo brɛ wɔn ho ase tie asɛm a Yesu kae yi. Ɔkae sɛ: “Ɛnsɛ sɛ wɔfrɛ mo Rabi, efisɛ obiako ne mo kyerɛkyerɛfo, na mo nyinaa yɛ anuanom. Bio nso, mommfrɛ obiara mo agya asase so, na obiako ne mo Agya, Ɔsorosoroni no. Afei nso ɛnsɛ sɛ wɔfrɛ mo ‘akannifo,’ efisɛ mo Kannifo yɛ biako, ɔne Kristo. Mmom no, ɛsɛ sɛ nea ɔyɛ mo mu kɛse no yɛ mo somfo. Obiara a ɔma ne ho so no wɔbɛbrɛ no ase, na obiara a ɔbrɛ ne ho ase no wɔbɛma no so.” (Mat. 23:8-12) Ɛno nti, Adansefo a wɔwɔ asafo ahorow a ɛwɔ wiase nyinaa mu no dɔ wɔn mfɛfo Adansefo a wɔsom sɛ asafo mu mpanyimfo no, na wɔde obu ne nidi ma wɔn.
Sɛ asafo mu mpanyimfo som ahobrɛase mu a, afoforo bɛdɔ wɔn, abu wɔn, na wɔadi wɔn ni (Hwɛ nkyekyɛm 13-15)
16. Bible mu asɛm a ɛka sɛ yɛmfa nidi mma afoforo no, adɛn nti na ɛsɛ sɛ wokɔ so yere wo ho sɛ wobɛte ase na wode ayɛ adwuma?
16 Nokwasɛm ne sɛ, ebia ebegye bere kakra ansa na yɛahu sɛnea yɛde nidi a ɛfata bɛma afoforo ne wɔn a ɛfata sɛ yɛde nidi a ɛte saa ma wɔn. Saa na na ɛte wɔ tete Kristofo no nso fam. (Aso. 10:22-26; 3 Yoh. 9, 10) Nanso, mfaso wɔ so paa sɛ yɛyere yɛn ho sɛ yɛde nea Bible ka fa nidi a yɛde bɛma nkurɔfo ho no bɛyɛ adwuma. Sɛ yehu nidi a ɛfata sɛ yɛde ma obiara a, mfaso pii fi mu ba.
MFASO WƆ NIDI A ƐFATA A YƐDE MA SO
17. Sɛ yɛde nidi ma wɔn a wodi tumi no a, ɛso mfaso no bi ne sɛn?
17 Sɛ yɛde obu ne nidi ma wɔn a wodi tumi wɔ wiase no a, ɛda adi paa sɛ wobegyina yɛn akyi aka bi ama yɛn sɛ yɛwɔ hokwan sɛ yɛka asɛmpa no a ɛnsɛ sɛ obiara siw yɛn kwan. Mpɛn pii no, saa a yɛyɛ no ma nkurɔfo nya adwempa wɔ yɛn som adwuma no ho. Birgit yɛ ɔkwampaefo a ɔwɔ Germany. Bere a ne babea rewie sukuu mfe bi a atwam no, ɔkɔɔ adesua awiei no ase bi. Akyerɛkyerɛfo no ka kyerɛɛ Birgit sɛ, ɛyɛ wɔn anigye paa sɛ mfe a atwam no wɔanya Adansefo mma wɔ wɔn sukuu no mu. Wɔkae sɛ, sɛ wonni Adansefo mma biara wɔ sukuu no mu a, anka ɛbɛhaw adwene paa. Birgit kyerɛkyerɛɛ mu sɛ, “Yɛkyerɛkyerɛ yɛn mma sɛ wɔmfa Onyankopɔn asɛm mmɔ wɔn bra. Nea yɛakyerɛkyerɛ wɔn no bi ne sɛ, wommu wɔn akyerɛkyerɛfo na wonni wɔn ni.” Ɔkyerɛkyerɛfo baako kae sɛ, “Sɛ mmofra nyinaa te sɛ mo mma no a, anka sukuu bɛyɛ te sɛ paradise.” Nnawɔtwe bi akyi no, akyerɛkyerɛfo no baako kɔɔ ɔmantam nhyiam wɔ Leipzig.
18, 19. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye wɔ nidi a yɛde ma asafo mu mpanyimfo no ho?
18 Ɛsɛ sɛ yɛde nidi a ɛfata ma asafo mu mpanyimfo no. Nanso, ɛsɛ sɛ yɛma Onyankopɔn Asɛm no mu nnyinasosɛm a edi mũ na nyansa wom no kyerɛ yɛn kwan. (Kenkan Hebrifo 13:7, 17.) Yebetumi akamfo wɔn wɔ adwumaden a wɔyɛ no ho, na ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa. Saa ara nso na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden tie akwankyerɛ a wɔde ma yɛn no. Sɛ yɛyɛ saa a, ebetumi aboa wɔn ama wɔakɔ so de anigye ayɛ wɔn som adwuma. Nanso, wei nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ asafo mu panyin bi a “yenim no yiye” ntadehyɛ ne n’ahosiesie, sɛnea ɔma baguam kasa, anaa mpo ɔkwan a ɔfa so bɔ nkɔmmɔ na yesuasua no pɛpɛɛpɛ. Sɛ yɛyɛ saa a, ebetumi ama nkurɔfo anya adwene a ɛmfata. Ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ, asafo mu panyin no nso yɛ onipa a ɔtɔ sin. Kristo nkutoo na ɛfata sɛ yedi n’akyi na yesuasua no.
19 Sɛ yɛanhoahoa asafo mu mpanyimfo te sɛ nea nkurɔfo hoahoa nnipa a wɔagye din no, na mmom yɛde nidi ne obu a ɛfata ma wɔn a, na yɛreboa wɔn. Sɛ yɛanhoahoa wɔn a, ɛbɛyɛ den sɛ wɔbɛyɛ ahantan, anya adwene sɛ gyama wɔsen afoforo, anaa ama wɔabu wɔn ho sɛ wɔyɛ treneefo dodo.
20. Sɛ yedi afoforo ni a, ɛboa yɛn sɛn?
20 Yɛn ankasa nso, sɛ yɛde nidi ma wɔn a ɛfata wɔn a, ɛremma yɛnyɛ pɛsɛmenkominya. Ɛboa yɛn ma sɛ afoforo de nidi bi ma yɛn a, yɛrenyɛ ahomaso. Ɛsan nso boa yɛn ma yɛne Yehowa ahyehyɛde no nantew, efisɛ Yehowa ahyehyɛde no mfa nidi a ɛtra so anaa nidi a ɛmfata mma onipa biara, sɛ́ wɔyɛ gyidifo anaasɛ wɔnyɛ gyidifo no. Afei nso, nyansa wom sɛ yɛrenhoahoa nkurɔfo efisɛ ɛbɛboa yɛn na sɛ nnipa bi a yɛde nidi ma wɔn di yɛn huammɔ a, anto yɛn hintidua.
21. Sɛ yɛde nidi a ɛfata ma wɔn a ɛsɛ wɔn a, mfaso a ɛkyɛn so bɛn na yebenya?
21 Sɛ yɛde nidi a ɛfata ma wɔn a ɛsɛ wɔn a, mfaso a ɛkyɛn so a yebenya ne sɛ, ɛbɛma yɛasɔ Onyankopɔn ani. Sɛ yɛyɛ saa a, na yɛreyɛ nea Yehowa pɛ, na ɛbɛboa yɛn ama yɛakɔ so akura yɛn mudi mu. Ɛno bɛma Yehowa anya asɛm abua obiara a ɔbɛyɛ n’adwene sɛ ɔbɛbɔ no ahohora no. (Mmeb. 27:11) Nnipa a wɔwɔ wiase no mu dodow no ara nnim sɛnea wɔde nidi a ɛfata bɛma afoforo. Ɛyɛ yɛn anigye sɛ yɛabehu sɛnea yɛde nidi bɛma afoforo ma asɔ Yehowa ani.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM March 2017
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM March 2017